UserTesting: Fizarana momba ny olombelona ilaina amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa | Martech Zone
HTML tsy tafiditra
Ny varotra maoderina dia ny mpanjifa ihany. Raha te hahomby amin'ny tsenan'ny mpanjifa, ny orinasa dia tokony hifantoka amin'ny traikefa; tsy maintsy miombom-pihetseham-po amin'izy ireo sy mihaino ny hevitry ny mpanjifa izy ireo hanatsarana hatrany ny traikefa noforonin'izy ireo sy natolony. Ny orinasan-tserasera izay mandray ny fahitan'olombelona ary mahazo valinteny kalitao avy amin'ny mpanjifany (fa tsy ny angona fanadihadiana fotsiny) dia afaka mifandray akaiky kokoa amin'ireo mpividy sy mpanjifany amin'ny fomba misy heviny kokoa.
Ny fanangonana ny fahitan'olombelona dia toy ny fametrahana ny tenanao amin'ny kiraron'ny mpanjifanao hianatra, hahatakatra ary hivoatra amin'izay ilain'izy ireo. Miaraka amin'ny fomba fijerin'olombelona, ​​ny orinasa dia afaka misambotra ny fahiratan-tsaina ilaina takiana hanatratra ny mpanjifa amin'ny fomba vaovao sy vaovao ary mahomby izay misy fiantraikany tsara amin'ny fidiram-bola, ny fitazonana ary ny tsy fivadihana.
UserTesting: Topimaso momba ny vokatra
Ny traikefa ratsy amin'ny tranokala sy fampiharana, ary amin'ny tontolo tena izy, dia tsy mahasosotra ny mpanjifa fotsiny, fa mandany vola an-tapitrisany dolara isan-taona ny orinasa. UserTesting manamora ny fahazoan'ny fikambanana valiny arak'asa avy amin'ny tsenany lasibatra — na aiza na aiza misy azy ireo. Miaraka amin'ny sehatr'asa takiana momba ny UserTesting, azon'ny fikambanana atao ny manavaka ny 'antony' ao ambadiky ny fifandraisan'ny mpanjifa. Amin'ny fahafantarana ny tanjona, ny orinasa dia afaka manatsara sy manome traikefa mahatalanjona, miaro ny marika ary mitondra fahafaham-po ho an'ny mpanjifa bebe kokoa. Miaraka amin'ny sehatra UserTesting, ny orinasa dia afaka:
Target- Mitadiava sy mifandraisa amin'ireo mpijery tena ilaina, tsy misy fiezahana, tsingerina lava na vidiny mifandraika amin'ny fanangonana olona an-tanana hanome hevitra.
Midira amin'ny mpanjifa sy ireo matihanina amin'ny orinasa manerana izao tontolo izao on-demand miaraka amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanadihadiana voamarina lehibe indrindra.
Midira amin'ny mpanjifa, mpiasa ary mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny mailaka, media sosialy na fantsona hafa.
Mampiasà personas manokana, mampiasa ny fahaizan'ny sivana, toy ny mason-tany, demografika ary ny fepetra ara-tsosialy.
Mifandraisa amin'ireo mpihaino manokana ary sarotra ny manatratra ireo mpikarakara panel miaraka amin'ny fanampian'ny ekipanay manam-pahaizana.
Hamarino fa mahazo valiny tsara indrindra ianao hampahafantarana ny ezaka ataonao CX amin'ny alàlan'ny tontolon'ny mpanjifa sy ny orinasa voalohany voamarina sy voarindra ny UserTesting.
Engage- Safidio ny karazana fitsapana izay hanome ny fomba fijery tena ilaina sy azo ampiasaina raha tsy misy ny olana ara-pitantanana na ny ilana fahaizana momba ny fikarohana.
Mahazoa valiny ao anatin'ny 1-2 ora amin'ny alàlan'ny modely, ny fandraisana ho azy ary ny endri-javatra hanandramana ny zavatra niainanao.
Mahazoa valiny amin'ny zavatra rehetra, toy ny birao, fampiharana finday, na traikefa eo an-toerana, ary vokatra amin'ny dingana fampandrosoana rehetra.
Fametrahana mora ka izay rehetra ao amin'ny ekipanao dia afaka mamorona fandalinana mivantana na voarakitra isaky ny tetikasa, amin'ny fotoana rehetra.
Ny valiny ao anatin'ny ora maromaro dia midika fa afaka mizaha izay rehetra ilainao amin'ny fahitan'ny mpanjifa ianao, amin'ny fanesorana ny vinavina ao ambadiky ny fampiasam-bolanao - na prototypes vita amin'ny vokatra, famerenana ny famolavolana, hafatra ara-barotra, sary fampielezan-kevitra, kopian'ny tranonkala.
Miaraha miasa amin'ny manam-pahaizana anay rehefa mila fanampiana amin'ny famolavolana fandalinana sarotra kokoa ianao.
Fantaro- Haka sy hisongadina ny fanehoan-kevitra sy valiny misy dikany, avy eo manamafy manerana ny fikambanana hampitombo ny fiaraha-miasa sy ny marimaritra iraisana.
Miaraka amin'ny fahitan'ny mpanjifa rehetra amin'ny toerana iray, ny famakafakana haingana dia azo atao amin'ny alàlan'ny fisarihana ny data feno.
Mitrandraha sy manasongadina ny fahalalan'ny mpanjifa mitsikera mba hitarika ny marimaritra iraisana amin'ny fanapahan-kevitra mety sy ny dingana manaraka.
Ny fizarana ny fahaiza-manao dia manamora ny fampifangaroana ny zavatra hita manerana ny fandaminana iray manontolo.
Makà fividianana mpividy amin'ny alàlan'ny fanoloranao porofo mazava sy tsy azo iadian-kevitra momba izay tadiavin'ny mpanjifa, ilaina ary antenaina.
UserTesting: Ahoana ny fomba fiasany
UserTesting: Endri-javatra lehibe
UserTesting dia manohy manatsara ny sehatra fijerin'olombelona ary nanampy galerie modely vaovao, endri-javatra mikoriana fankatoavana, fitsapana hazo, fampidirana miaraka amin'ny Qualtrics XM Platform, ary tag mahay.
Ampifanaraho ny valin'ny fanadihadiana sy ny horonan-tsary hahafantarana ny "antony" ao ambadiky ny andrasan'ny mpanjifa
Ampidiro ny sehatra Qualtrics XM ho fampitomboana ny angona fanadihadiana miaraka amin'ny fahitana kalitao, hitondra ny sahan-kevitra lehibe kokoa amin'ny "maninona" ao ambadiky ny valin'ny fanadihadiana.
Mianara mampiasa leverage mba hitrandrahana haingana ireo fotoana manan-danja indrindra amin'ny mpanjifa
Mampiasà tagy marani-tsaina hahitana sy hahatakarana ireo fotoana tena ilaina indrindra ao anatin'ny seho fanehoan-kevitra amin'ny horonan-tsary
Araraoty ny maodely fianarana milina hanombanana ny valiny momba ny vidéo sy ny fandalinana amin'ny fotoana tena izy.
Mpampiasa fanandramana ny mpikarama ahy - MyRecruit manome alalana ny orinasa hitrandraka amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa, mpiasa ary mpiara-miasa aminy manokana hanangonana hevi-baovao sy valiny. Amin'ny fandinihana ny zavatra niainan'ireo mpihaino teo aloha, ny orinasa dia afaka miantoka fa mamantatra ireo filan'ny orinasa manokana izay tsy voahaja izy ireo ankehitriny.
Angony ny fangatahana, azo ampiharina, fanamarihana avy amin'ny mpanjifa efa misy, manam-pahaizana momba ny indostria ary maro hafa.
Mahazoa haingana kokoa ny fahitana amin'ny fanandramana serivisy tena tanteraka miaraka amin'ny mpihaino kendrena mafy.
Ampidiro ny mpiasa ary miteraka fientanam-po amin'ny marikao sy ny vokatrao.
UserTesting Resadresaka mivantana - Resadresaka mivantana manome resadresaka mivantana sy antonony izay voarakitra an-tsoratra sy adika ho azy mba hahazoana antoka fa azo sintonina sy azo zaraina manerana ny fikambanana ny fianarana rehetra. Ny Resadresaka mivantana dia manome alalana ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny mpanjifa amin'ny andro iray, 1: 1 ary manohana ny feon'ireo fandraisana andraikitry ny mpanjifa. Ireo mpandinika dia afaka mandinika ireo fambara tsy am-bava, toy ny endrika endrika sy feon'ny feo mba hiombom-pihetseham-po bebe kokoa amin'ilay mpampiasa farany - ary afaka mivezivezy haingana na mitarika ny fifanakalozan-kevitra handrehitra lohahevitra manokana na hahatakatra bebe kokoa ny fomba fijerin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny Live Conversation, omena fotoana ny mpandray anjara hanome sehatra bebe kokoa amin'ny fanontaniana, hizara ny toerana nihaonana ny fanamby, ary hanome ny orinasa hevitra hanatsarana.
Ny fikarohana nataon'ny antoko fahatelo dia mampiseho fa ny vondron'olona mifantoka amin'ny tena manokana dia mety hanana fanamby maro. Anisan'ireny ny fandraisana anjaran'ny fotoana, ny fikaroha olana amin'ny fanandramana ireo mpanandramana mifandraika amin'izany, ny groupthink, ary ny fiakaran'ny vidiny ary ny santionany. Ny UserTesting dia manamaivana ireo vato misakana ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana fikarohana ataon'ny mpampiasa (antonony na tsy voalamina), mangataka ny hevitry ny mpanjifa ary / na mitantana resadresaka 1: 1 tsotra, tsy lafo, be fangatahana ary fotoana tena izy.
Ny sandan'ny asa aman-draharaha mpanjifa mahafinaritra
Araka ny Forrester, 73 isan-jaton'ny orinasa no mihevitra ny traikefan'ny mpanjifa ho laharam-pahamehana, nefa ny iray isanjaton'ny orinasa ihany no manome traikefa tena tsara - fa raha tianao ny tsy hivadihan'ny mpanjifanao dia mila manolo-tena amin'ny fananganana ilay traikefa ianao. Mba hiantraikany tsara amin'ny fidiram-bola farany ambany dia tsy maintsy mitantana sy mampiasa vola amin'ny traikefa ho an'ny mpanjifa ianao ary mandray ny fianarana tsy tapaka sy ny fahitana hitadiavana sy hanatsara hatrany ny traikefa omenao ny mpampiasa farany. Androany, ny fitarihana ny tsena sy ny fanavahana ny fifaninanana dia manapa-kevitra hatrany amin'izay manome ny traikefa mpanjifa tsara indrindra. Ireo orinasa mampiasa vola amin'ny CX dia mahazo tombony amin'ny fanatsarana ny fitazonana ny mpanjifa, ny fahafaham-po ny mpanjifa ary ny fampiakarana ny tombam-barotra amidy ary ny fivarotana.
Isika izao dia amin'ny fotoana izay tsy maintsy ilain'ny mpanjifa hatrany amin'ny faran'ny orinasa. Ny mpanjifa dia miorina fanandramana tsara amin'ny zavatra heverin'izy ireo fa fanandramana tsara ho lasa; tsy mifototra amin'ny zavatra niainany taloha. Noho io antony io dia zava-dehibe ny fanomezana ireo orinasa ireo hevi-baovao ilainy hanatsarana hatrany ny fanantenan'ny mpanjifa.
Andy MacMillan, CEO an'ny UserTesting
Misorata anarana amin'ny fanandramana maimaimpoana ho an'ny UserTesting
Tags: Andy MacMillanfitadiavana mpanjifapaikadin'ny traikefa ho an'ny mpanjifacxorinasafitaovana fanehoan-kevitrafamoronana mifototra amin'ny olombelonaVondron-kôlisiôna misy ny kaontinantaresaka mivantanaMicrosoftfamakafakana fampiharana findaytamberina fampiharana findayfitsapana ny fampiharana findaympanafika ahyfanavaozana ny vokatraQualtrics XMhevitra momba ny tranokalafitilianafitsapana mpampiasausertestingfeon'ny mpanjifawalmart canada